साप्ताहिक संवाददाता , आश्विन ३०, २०७५
नरिवलको दुध : ३० एमएलक्रिम : १५ एमएलवरफ : केही टुक्रासजावटका लागि : केहि टुक्रा भुइँकटर प्रयोग गर्न सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
धेरै मानिसहरू ताससँग सम्बन्धित गेम निकै रुचाउँछन् । त्यसैले यससँग सम्बन्धित एप्सको प्रयोग पनि बढ्दो छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाली एप डेभलपरहरूले पनि त्यस्तै एप्स तयार पारेका छन् । जीवन श्रेष्ठले नै ‘कल ब्रेक प्लस प्लस’ एप्स निर्माण गरेका छन् र यसका प्रयोगकर्ता १० लाखको हाराहारी छन् । निमेष जोशीद्वारा निर्मित ‘कल ब्रेक’ एपका प्रयोगकर्ताको संख्या करिब ५ लाख छ । पुरा पढ्नुहोस्
महेश तिमल्सिना , आश्विन ३१, २०७५
 अहिलेको परिवेशमा युवाहरूलाई क्याजुअल पहिरन नै सुहाउँछ । यसमा जिन्सको कटन पाइन्ट तथा सर्ट उपयुक्त मानिन्छ । अहिले जिन्समा लोफर्स सुज प्रयोग गर्ने चलन छ ।  हिजोआजका युवायुवतीहरूले आरामदायक पहिरन खोजिरहेका हुन्छन् । यसका लागि जगर्समा टिसर्ट लगाउन सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
मानिसले आफ्नो फेसन स्टेटमेन्ट क्रिएट गर्दा शरीरको बनावटको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । जस्तै मोटो शरीर भएकाहरूलाई खुकुला पहिरन राम्रो देखिँदैन । मोटो शरीर भएका महिला–पुरुषले कालो रङको पहिरन लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी पातलो शरीर भएकाहरूले ठूलो प्रिन्ट भएका पहिरनबाट जोगिनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , आश्विन ३१, २०७५
ग्रेभी राम्रोसँग पाकेपछि त्यसको तेल र मसला छुट्टिन्छ, त्यसमा अगाडि फ्राई गरिएको मटन हाल्ने र दुवैलाई चलाउँदै पकाउने । यता एउटा कचौरामा गोल बाल्ने र उक्त कचौरालाई अफगानी ग्रेभीको बीचमा राखेर गोलमाथि सुकुमेल, ल्वाङ तथा मख्खन डढाउने र ग्रेभी राखिएको भाडाको बिर्को लगाएर केहीबेर छोपिदिने । धूवाँ आउन छाडेपछि मटन अफगानी ग्रेभी तयार हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
वसन्त खत्री, आश्विन ३१, २०७५
कहिले जीवन ओरालीमाकहिले भने उकालीमायात्रा गर्दा–गर्दै कहिलेभन्ज्याङ–देउरालीमा पुरा पढ्नुहोस्
प्रा.डा. वीणा पौड्याल, संस्कृतिविद्आश्विन ३१, २०७५
चामलको सग्लो गेडालाई अक्षता भनिन्छ । संस्कृत शब्द अक्षतको अर्थ हो— नटुटेको, टुक्रा नभएको । देव तथा पितृ कार्यमा चढाउन प्रसादस्वरूप लगाउन सेतो, रातो तथा पहेंलो अक्षता प्रयोग गरिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
सुविन भट्टराई, आश्विन ३१, २०७५
घर फर्कने क्रममा मन उदास उदास हुन्छ । आफैँलाई प्रश्न गर्छु, मेरा साथीहरू कहीँका हुन्, म चाहिँ कहाँको ? बाले दु:ख गरेर कमाएर ल्याएको हजार–हजार नोट तिरेर बुझाउने घरबेटीको घर मेरो होइन । यो काठमाडौँ मेरो होइन । म कहाँको ? पुरा पढ्नुहोस्
चन्दन, अक्षता, फूल, अघ्र्य, पञ्चामृत एवं पायसले पूजा गर्ने विधिलाई सात्विक बलि भनिन्छ । सात्विकका साथै पशुपक्षीको रगत, मासु दिएर सन्तुष्ट गराउने विधिलाई राजस बलि भनिन्छ । सात्विक र राजस दुबै विधिसहित रक्सीसमेत चढाएर दिइने बलिलाई तामस बलि भनिन्छ । गुह्येश्वरी मन्दिरमा तामस विधिबाट बलि दिने परम्परा छ । दुर्गापक्षमा देवी स्थापना गरिएको स्थानमा विधिपूर्वक पशुमुक्तिका लागि भनेर संकल्प र प्रार्थना गरी पशुबलि दिने चलन छ । नेपालमा विशेषगरी बडादसैंका अवसरमा देवीका मन्दिरहरूमा बलि दिइन्छ । पुरा पढ्नुहोस्